नेपालमा करीब १५ हजार एचआईभी संक्रमित उपचारको पहुँचबाहिर
काठमाडौं – नेपालमा एचआईभी संक्रमितमध्ये ४७ प्रतिशत एआरभी उपचारको पहुँचमा नरहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालमा ३१ हजार २० जनामा एचआइभी संक्रमण रहेको र तीमध्ये १९ हजार २० जना पुरुष तथा १२ हजार महिला रहेको केन्द्रले जनाएको छ । एचआईभी संक्रमितमध्ये १६ हजार ४ सय २८ जना मात्रै एआरभी उपचारको रहेको केन्द्रको तथ्याङ्क छ । बाँकी ४७ प्रतिशत एआरभी उपचारको पहुँचमा नरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. तारानाथ पोख्रेलका अनुसार ७६ प्रतिशत एचआईभी असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सरेको छ ।
हामीले जनचेतामूलक कार्यक्रम गरिहेका छौं, तर सबैको पहुँचमा सन्देश पुग्न सकेको छैन,’ निर्देशक डा. पोख्रेलले भने, ‘७६ प्रतिशत एचआईभी संक्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण सरेको छ ।’
नेपालमा सुइद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्नेहरू, यौनकर्मी, पुरुष समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरूमा एचआईभीको उच्च जोखिममा रहेका छन् । यस्तै रोजगारीका लागि विदेशिने र जेलमा रहेका कैदीहरू एचआईभीको जोखिममा रहेका छन् ।
नयाँ संक्रमणको दर घट्दै
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकका अनुसार सन् २०१० देखि १७ सम्ममा नयाँ एचआईभी संक्रमितको संख्या घट्दै आएको देखिएको छ ।
सन् २०१० देखि २०१७ सम्ममा ६१ प्रतिशतले नयाँ संक्रमण घटेको छ । यस्तै गर्भवती आमाबाट हुने संक्रमणको दर ६३ प्रतिशतले घटेको छ । तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा एड्सका कारण मृत्यु हुने दर २३ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपालले एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्न र दिगो विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सन् २०२० सम्ममा ९० प्रतिशत एचआईभी संक्रमितहरूले आफ्नो संक्रमणको अवस्थाबारे थाहा पाउने, तीमध्ये ९० प्रतिशतको औषधि उपचारमा पहुँच हुने र औषधिको प्रयोग गर्नेहरूमध्ये ९० प्रतिशतमा शरीरमा भइरसको भार न्यून बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सोही लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सरकारले यस वर्षको विश्व एड्स दिवसलाई ‘एचआईभीको जाँच गराऔं, आफ्नो अवस्था थाहा पाऔं’ भन्ने नारा सहित जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दैछ ।
मंसिर १४, २०७५ मा प्रकाशित